Network Infrastructure Security Tools - BIM Trainings
Dec 8, 2015 | Posted by	admin | Uncategorized	|
ဒီနေ့တော့ Network Security အကြောင်းနည်းနည်း ပြောရအောင်။ Network Security လို့ပြောလိုက်ရင် Firewall ၊ VPN ကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ယနေ့ခတ် Nnetwork များကို လုံခြုံအောင်လုပ်ရတာဟာ အရှုပ်ထွေးဆုံးအလုပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mobile Technology တွေနဲ့ Internet ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကြောင့် Network တွေဟာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း တွေအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ Network တွေဟာလည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်တုံးကမှနဲ့မတူအောင် ချိတ်ဆက်မိနေပြီး Network တစ်ခုကိုဝင်ရောက် ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ Entry Point နေရာတွေ ဟာလည်း များသထက်များလာပါပြီ။ ဒီလိုမျိုးတိုးတတ်လာတဲ့ Network Technology တွေနဲ့အညီ အဲဒီ Network တွေရဲ့လုံခြုံရေး ကာကွယ်ရတာဟာလဲ တစ်နေ့တခြား ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတော့တယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ Security ကို Design လုပ်ရာမှာ အလွှာလိုက်ခွဲပြီး အလွှာတစ်ခုချင်းဆီရဲ့ လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက် များနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကို Focus လုပ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုကာကွယ်ရပါတယ်။ ဥပမာ အဖြစ် လေဆိပ် လုံခြုံရေးကို ကြည့်ရအောင်. လေဆိပ်အများစုမှာ အများပြီသူဝင်ထွက်သွားလာနိုင်တဲ့ Main Terminal Area ရှိပါတယ် ၊ Departure Hall ၊ Arrival Hall စသည်ဖြင့် ၊ အဲဒီမှာ Boarding Pass ထုတ်ပြီး ပြီဆိုရင်တော့ Security/Immigration ကိုဖြတ်ပြီး Transit Area ကိုဝင်လို့ရပါပြီ။ အဲဒီမှာတစ်ဆင့် Boarding Gate မှာ Security Ccheck ကို ဖြတ်ပြီးရင်တော့ Boarding Area ကိုဝင်လို့ ရပါပြီ။ Yangon လေဆိပ်မှာတော့ Main Terminal Area နဲ့ Transit Area ကြားမှာ Security Layer တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။
ဒီလိုပဲ Network Security ကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာလဲ Layer အဆင့်ဆင့်ခွဲပြီး ကာကွယ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါမှလည်း Layer တစ်ခုက Security ပေါက်သွားသည့်တိုင်အောင် Network Infrastructure တစ်ခုလုံးအတွက် တခြား Layer က Security Tools တွေရှိနေအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုနောက်ပိုင်း Layer အစုံက Security Tool တွေရဲ့သတင်းအချက်အလက် တွေကို ကောက်ယူ Analyze လုပ်နိုင်အောင် SIEM လို့ခေါ်တဲ့ Security information and event management Tool တွေကိုသုံးလာကျပါတယ်။
Security ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ Network Engineer တွေအတွက် အခုနောက်ပိုင်း Enterprise Network တွေမှာ Network Layer တစ်ခုခြင်းမှာ ရှိတတ်တဲ့ Tools တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Physical Security : Physical Layer အတွက် လုံခြုံရေး
CCTV ၊ Door Access ၊ Lockable Rack စသည်များ
Infrastructure Security : DoS ၊ Network Access Control ၊ Traffic Control စသည်များအတွက် လုံခြုံရေး
Layer2– MAC security, STP BPDU, L2 ALC, Dot1x စသည်များ
Layer3– L3 ACL, L3 routing security, CoPP
Deep packet inspection (DPI) – IPS, IDS
Network Firewall: Network တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား Traffic Filter လုပ်ခြင်း ၊ အများအားဖြင့် Filter တွေကို Chokepoint တွေမှာထားလေ့ရှိပါတယ်။
Router ACL ၊ Zone based Firewall (ZBFW) ၊ Stateful firewall (ASA) ၊ Next generation firewall (NGNFW)
Host Level Security: End Host ရဲ့ System ပေါ်မှာ Run ပြီး Application ၊ File System တွေနဲ့ Operating System တွေကိုအကာအကွယ်ပေးပါတယ်။
Host-based firewalls, host-based IPS, file system integrity checking, host antivirus/ani-malware
Application Layer Security: Application အမျိုးအစားပေါ်မှာ မူတည်ပြီး Protect လုပ်တဲ့ Security Tools များ
Web proxy/filtering, e-mail proxy/filtering, web application firewall (WAF)
Confidentiality and Integrity (Cryptography):
L2 to L7 encryption such as MACSec, IPSec, SSL
ဒီနတေ့ော့ Network Security အကွောငျးနညျးနညျး ပွောရအောငျ။ Network Security လို့ပွောလိုကျရငျ Firewall ၊ VPN ကိုပဲ ပွေးမွငျတတျကပြါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျတှမှေ့ာတော့ ယနခေ့တျ Nnetwork မြားကို လုံခွုံအောငျလုပျရတာဟာ အရှုပျထှေးဆုံးအလုပျတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ Mobile Technology တှနေဲ့ Internet ဖှငျ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှကွေောငျ့ Network တှဟော စီးပှါးရေးလုပျငနျး တှအေတှကျ အဓိက လိုအပျခကျြတဈခုလိုဖွဈလာပါတယျ။ Network တှဟောလညျး တဈခုနဲ့တဈခု ဘယျတုံးကမှနဲ့မတူအောငျ ခြိတျဆကျမိနပွေီး Network တဈခုကိုဝငျရောကျ ခြိတျဆကျနိုငျတဲ့ Entry Point နရောတှေ ဟာလညျး မြားသထကျမြားလာပါပွီ။ ဒီလိုမြိုးတိုးတတျလာတဲ့ Network Technology တှနေဲ့အညီ အဲဒီ Network တှရေဲ့လုံခွုံရေး ကာကှယျရတာဟာလဲ တဈနတေ့ခွား ပိုပွီးတော့ခကျခဲလာပါတော့တယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ကတော့ Security ကို Design လုပျရာမှာ အလှာလိုကျခှဲပွီး အလှာတဈခုခငျြးဆီရဲ့ လုံခွုံရေးလိုအပျခကျြ မြားနဲ့ စိနျချေါမှုမြားကို Focus လုပျပွီး သငျ့တျောတဲ့ နညျးလမျးကိုအသုံးပွုကာကှယျရပါတယျ။ ဥပမာ အဖွဈ လဆေိပျ လုံခွုံရေးကို ကွညျ့ရအောငျ. လဆေိပျအမြားစုမှာ အမြားပွီသူဝငျထှကျသှားလာနိုငျတဲ့ Main Terminal Area ရှိပါတယျ ၊ Departure Hall ၊ Arrival Hall စသညျဖွငျ့ ၊ အဲဒီမှာ Boarding Pass ထုတျပွီး ပွီဆိုရငျတော့ Security/Immigration ကိုဖွတျပွီး Transit Area ကိုဝငျလို့ရပါပွီ။ အဲဒီမှာတဈဆငျ့ Boarding Gate မှာ Security Ccheck ကို ဖွတျပွီးရငျတော့ Boarding Area ကိုဝငျလို့ ရပါပွီ။ Yangon လဆေိပျမှာတော့ Main Terminal Area နဲ့ Transit Area ကွားမှာ Security Layer တဈခုရှိပါသေးတယျ။
ဒီလိုပဲ Network Security ကိုစဉျးစားတဲ့အခြိနျမှာလဲ Layer အဆငျ့ဆငျ့ခှဲပွီး ကာကှယျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါမှလညျး Layer တဈခုက Security ပေါကျသှားသညျ့တိုငျအောငျ Network Infrastructure တဈခုလုံးအတှကျ တခွား Layer က Security Tools တှရှေိနအေုံးမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အခုနောကျပိုငျး Layer အစုံက Security Tool တှရေဲ့သတငျးအခကျြအလကျ တှကေို ကောကျယူ Analyze လုပျနိုငျအောငျ SIEM လို့ချေါတဲ့ Security information and event management Tool တှကေိုသုံးလာကပြါတယျ။
Security ကိုစိတျဝငျစားတဲ့ Network Engineer တှအေတှကျ အခုနောကျပိုငျး Enterprise Network တှမှော Network Layer တဈခုခွငျးမှာ ရှိတတျတဲ့ Tools တှကေို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
Physical Security : Physical Layer အတှကျ လုံခွုံရေး
CCTV ၊ Door Access ၊ Lockable Rack စသညျမြား
Infrastructure Security : DoS ၊ Network Access Control ၊ Traffic Control စသညျမြားအတှကျ လုံခွုံရေး
Layer2– MAC security, STP BPDU, L2 ALC, Dot1x စသညျမြား
Network Firewall: Network တဈခုနဲ့ တဈခုကွား Traffic Filter လုပျခွငျး ၊ အမြားအားဖွငျ့ Filter တှကေို Chokepoint တှမှောထားလရှေိ့ပါတယျ။
Host Level Security: End Host ရဲ့ System ပျေါမှာ Run ပွီး Application ၊ File System တှနေဲ့ Operating System တှကေိုအကာအကှယျပေးပါတယျ။
Application Layer Security: Application အမြိုးအစားပျေါမှာ မူတညျပွီး Protect လုပျတဲ့ Security Tools မြား
We areaglobal group comprising of young and talented professionals devoted to shaping your future in achieving your career success among the competitive transformation.